Nifanjevo indray ny mpianatra sy ny Emmo/Reg: tora-bato, lakrimozena teny Ankatso, omaly | NewsMada
Nifanjevo indray ny mpianatra sy ny Emmo/Reg: tora-bato, lakrimozena teny Ankatso, omaly
Par Taratra sur 04/07/2018
Nenjehin’ny Emmo/Reg hatrany anatin’ny faritry ny oniversite, omaly, ireo voalaza ho “mpianatra mpanakorontana”, nanao tora-bato, barazy, doro-kodiarana, nanelingelina ny fifamoivoizana sy ny fiveloman’ny olon-tsotra. Raitra ny tora-bato… toraka grenady lakrimozena.
Nitohy ny fitokonan’ny mpianatra eny amin’ny oniversiten’Antananarivo, omaly maraina. Vao maraina nametraka sakana amin’ny lalana ivezivezen’ny fiara sy ny olona avy eny Ambolonkandrina mandeha eny Ankatso II ny mpianatra. Nitaraina vokatr’izay ny mpampiasa lalana ka nampandre ny tomponandraikitra ao amin’ny CrouA. Tonga teny an-toerana ny tomponandraikitra nifampidinika tamin’ny mpianatra ary niangavy ny hanesorana ny sakana. Tsy nanaiky ny hanala izany ny mpianatra ka voatery niditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana nanaisotra ny sakana satria nanohintohina ny fivezivezen’ny daholobe, araka ny fanazavan’ny talen’ny CrouA, Andriamihajaniaina Samson Willy.
Niditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana
Tsy nijanona tao anatin’ny faritry ny oniversite ny hetsika teny amin’ny Esplanade fa nidina teny amin’ny toeram-piantsonan’ny taxi-be. Nitoraka ireo mpivarotra miasa manamorona ny toeram-piantsonana izy ireo ka nitarika ny fanakatonana ny toeram-pivarotana. Namaly bontana ny mpivarotra ka nikasa ny hiditra ny faritry ny oniversite. Voahidy ara-potoana ny vavahady ary niditra an-tsehatra indray ny mpitandro filaminana nandamina. Nanameloka ny fidiran’ny mpitandro filaminana ao anatin’ny faritry ny oniversite ny mpampianatra mpikaroka (Seces sampana Antananarivo) sy ny mpandraharaha ary ny mpianatra satria tsy mbola noesorina ny “franchise universitaire”. Amin’ny toe-javatra tahaka izao, tsy voatery miala ny “franchise” vao afaka miditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana satria manohintohina ny filaminana ny mpitokona. Tsy nahasarika olona maro ny hetsika omaly ka nitady fomba hanehoana ny fitokonana ny mpianatra. Efa midinika miaraka amin’ny solontenan’ny mpianatra mpitokona ny tomponandraikitra isorohana ny savorovoro tahaka ny nitranga omaly.